Fandikan-teny: Inona no fitaovana ampiasainao? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jolay 2019 8:34 GMT
Maro ireo fitaovana azon'ny mpandika teny ampiasaina amin'izao andro izao – ahoana no ahafahan'ny olona mahafantatra ireo fitaovana ireo, tsy lazaina intsony hoe inona no tokony hampiasainy? Inona no ampiasain'ny mpandika teny ankehitriny?
Izany no antony nanaovanay ny fitsapan-kevitra tamin'ny volana lasa, manontany ny vondrona Lingua Global Voices hoe: “Inona no fitaovana fandikan-teny tianao indrindra?” Ireto ny valiny:
Azonao atao ny mahita ny antsipirian'ny valin-teny ato. (Mariho azafady fa afaka mifidy zavatra maro ny mpandray anjara.)
Araka ny hitanao, dia nisafidy ny “Other Online Translation Tools (Fitaovana Fandikan-teny hafa An-tserasera)” ny ankamaroan'ny olona, arahin'ny ” CAT Tools( fitaovana milina fandikan-teny)” sy ny “Rakibolana Antserasera amin'ny Fiteny Roa.” Na dia sokajy midadasika aza ireo, dia fantatsika avy hatrany fa ampahany hita amin'ny tendron'ny vaingan-dranomandry “iceberg” izy ireo, ary manontany tena isika hoe fitaovana inona, indrindra ho an'ny fiarahamonintsika no tiany ampiasaina.
Koa dia ity ny andiam-panontaniana faharoa. 🙂
Mbola nanontany indray aho tao amin'ny Lahatsoratra Bilaogin'ny vondrom-piarhaamonina GV hoe: “Inona no fitaovana fandikan-teny tianao indrindra?”, Saingy nampiasa Google Forms tamin'ity indray mitoraka ity mba hijery lalindalina kokoa izay ampiasain'ireo mpandika teny hafa. Nametrahana fanontaniana 9 hofenoina ireo mpandray anjara mba hahazoana valiny maromaro amin'ny fanontaniana tsirairay. Misaotra betsaka ho an'ny rehetra nandray anjara! Tena nanampy tokoa ny valinteninareo, ary mankasitraka anao izahay mizara ny fahalalanao amin'ny fiarahamonintsika!
Raha tokony handefa tabilao sy soritsary amin'ny taonina ao amin'ity lahatsoratra ity, dia namorona endrika Google Slides amin'ny valin-teny aho. Raha hijery azy ireo dia tsindrio eto ary safidio avy eo ny “Presentation” eo amin'ny zorony ambony ankavanana. Aorian'izany, raha tianao ny hijery ireo tranonkala misy ireo fitaovana samihafa sy hijery ny zava-drehetra momba azy ireo, dia manana endrika Google Slides hafa aho izay ahitana rohy mifandraika amin'izany ihany koa. Tsy azoko antoka 100% izy rehetra ireo, ka vitsy no mbola tsy hita. Raha fantatrao izay rohy ampiasaina, na raha hitanao fa nampiasa rohy diso aho, dia ampahafantaro ahy azafady mba hahafahako manitsy izany ara-potoana.
Fitaovana maro hafa
Nahazo valin–teny tsara marobe izahay, saingy tsy lavorary izy ireo. Ho fanombohana, misy ity bilaogy ity izay avy amin'i Flo Bejgu mikasika ny fitaovana maimaim-poana afaka manampy anao amin'ny asa fandikan-teny ataonao. Na mety ho sahiran-tsaina kokoa ianao manoloana ny fetram-potoana? Jereo ny soso-kevitr'i Chiara Grassilli mikasika ny fitaovana mitsitsy fotoana. Mety tsy maintsy mandoa vola kely ianao, saingy mety hitsitsy ny volanao sy ny fahasorenanao mandritra ny fotoana maharitra ihany koa izany. Manana tranonkala mahasoa fampitahana milim-pitaovana fandikan-teny (CAT Tool) ihany koa ny ProZ.com. Ary aza adinoina ny mijery ny lahatsoratr'i Danelle mikasika izay loharano sy ny fomba ataony izay ankafiziny!
Raha mahafantatra fitaovana hafa ianao, na manana toro-hevitra sy fikafika tsara kokoa, dia mba zarao ao amin'ny fanehoan-kevitra eto ambany azafady!